Samurai Split kuyinto entsha isofthiwe NextGen amandla slot nge itolitji emihlanu futhi paylines amabili nanhlanu. Lokhu Slots Idiphozithi Ibhonasi Umdlalo liphefumulelwe China ne-Eastern yayo Amasiko. I itolitji lokhu slot asobala futhi ibhekene nempi edolobhaneni Chinese. I ihluzo kukhona kuhle futhi kukhona ingoma isihloko ezihlobene ngemuva okuhambisana abadlali Gameplay zabo. Lokhu Slots Idiphozithi Ibhonasi umdlalo has disaccord medium and omunye bangalindela i RTP ka 96.63%.
Ingabe ufuna ukuzama into okusha? Kungani Ngingavele Slots Idiphozithi Ibhonasi!!
Ngaphambi abadlali ukubhekana nilwe amaqhawe yizicukuthwane, bona belulekwa ukuba ulungise ukubheja yabo imikhawulo. Abadlali ngokuchofoza encane “Coin” isithonjana bese usetha zemali yabo usayizi ukuthi ububanzi phakathi 0.01 ukuze 2.50. Ngemva okuyinto, le “Play” inkinobho izosetshenziselwa ukubeka itolitji phakathi ezinyakazayo kwi ukubheja akhethiwe. Nokho, Uma uchofoza on the “Amasethingi” ke cogwheel ohlangothini engenhla kwesokudla, kuzovula imenyu enikeza abadlali ithuba ukuze usethe kubhejwa zabo noma ukukhetha Ukudlala sici.
Lokhu Slots Idiphozithi Ibhonasi umdlalo has 5 imifanekiso eziphathelene ne-theme kuhlanganise ithempeli, samurai, inkemba, eligibele ihhashi kanye umfuma ezincane. Ngokunjalo, abadlali yakha amagugu aphansi.
Isithonjana zasendle iyona enkulu yegolide isithonjana 'Wild' ukuthi shintsha zonke ezinye imifanekiso ukuze yakha combos ngokuwina ngaphandle banner chitha isithonjana.
Phakathi iyiphi spin eyodwa J, Q, A no-K kungaba ziyasuswa kusukela itolitji ukunikeza abadlali elinethuba ngokudala win ezinkulu.
Ngalesi sici, samurai inkemba art yokusebenzisa singaba usizo kabi futhi kungenzeka kunoma iyiphi spin ngoba slicing 1 noma imifanekiso ngaphezulu isigamu. futhi, kule nqubo, kuzodala imifanekiso ngaphezulu futhi kuyodinga ukwandisa amathuba womuntu onqobayo ezinkulu i.e kuze kufinyelele 32 izikhathi senkokhelo ejwayelekile.
Lokhu ivuswe ngu lokubikezela 3, 4 noma 5 ka chitha imifanekiso kunoma iyiphi ekubukweni kwesikrini zona kuzonikezwa 5, 10 noma ngaphezulu khulula osebenzisa ngokulandelana; Nokho, uma 5 Usakaza kuthiwa siwela itolitji bonke get waqhekezeka Samurai ke abadlali enenhlanhla anikezwa kuze kufinyelele 480 osebenzisa free.
Kukhona cartoonish nokuzwakala bokuzisholo kuya Samurai Split ukuthi uhambisana indaba ephathwayo kahle kakhulu. Bangu 3 bonus emahlandla ezahlukene okuyizinto ngempela ezithakazelisayo kanye nomvuzo. Kukonke, lokhu Slots Idiphozithi Ibhonasi game is a imali eningi, Umdlalo okudlalekayo alinikela kuwufanele jackpot kuze kufinyelele 500 zemali kule Gameplay.